A ga -ewu ụlọ ọrụ ụgbọ elu azụmahịa kacha ibu n'ụwa na Florida
Mbido » Akụkọ kacha ọhụrụ » Oghere Uzo » A ga -ewu ụlọ ụgbọ elu azụmahịa kacha ibu n'ụwa na Florida
Aviation • Na-agbasa News Travel • Njem azụmahịa • Akụkọ Ọchịchị • investments • News • ndị mmadụ • Ịrụ ọrụ • Oghere Uzo • Technology • Tourism • Transportation • Akụkọ Mgbasa Ozi Njem • Akwụkwọ akụkọ USA
A ga -ewu ụlọ ụgbọ elu azụmahịa kacha ibu n'ụwa na Florida
A ga -ewu ihe owuwu ahụ na mwepụta na ọdịda ala (LLF) na Merritt Island, Florida, ọ ga -enwekwa ihe iri na akpaaka na akpaaka nwere ike imepụta puku kwuru puku ụgbọ ala dị iche iche kwa afọ.
Gọvanọ Florida Ron DeSantis kwupụtara na Terran Orbital ga -etinye $ 300 nde na Florida.
Oghere Terran Orbital dị square mita 660,000 ga -emepụta ihe dị ka ọrụ ọhụrụ 2,100 na Florida.
Saịtị a ga -abụ ebe nrụpụta ụgbọ ala nke “Industry 4.0” nke kachasịnụ n'ụwa.
Terran Orbital, ụlọ ọrụ ngwọta satịlaịtị, na mmekorita ya na Space Florida, ikike ikuku na mbara ala Florida, nwere obi ụtọ isonye na Gọvanọ Florida Ron DeSantis taa ka ọ na -ekwupụta mmepe Terran Orbital nke atụmatụ ụwa kachasị ukwuu na nke kachasị elu “Industry 4.0”. ụlọ ọrụ na -emepụta ụgbọala. A ga -ewu ihe owuwu ahụ na mwepụta na ọdịda ala (LLF) na Merritt Island, Florida, ọ ga -enwekwa ihe iri na akpaaka na akpaaka nwere ike imepụta puku kwuru puku ụgbọ ala dị iche iche kwa afọ.
Ihe owuwu square 660,000 ga-egosipụta agbụ dabere na AI nke na-enye ohere na-enyere Terran Orbital aka ịkwado aha ya maka mmesi obi ike ozi na afọ ojuju ndị ahịa. Ihe owuwu a ga -anya isi na mbipụta 3D na teknụzụ nrụpụta ihe iji nye ohere nnyefe ụgbọ ala ngwa ngwa n'ahịa, yana ike imepụta na imepụta nke kacha mma, teknụzụ teknụzụ dị elu, ọgbakọ ọgbakọ sekit ebipụta nwere nnukwu nchekwa nchekwa eletrọnịkị. Tụkwasị na nke ahụ, ụlọ ọrụ ahụ ga -eji ahịrị ngwaahịa ngwaahịa ndị na -arụ ọrụ na -enyere aka ma na -enyere aka n'ịmepụta ọtụtụ ngwa elektrọnik na igwe.
"Enwere m obi anụrị ịkpọsa na Terran Orbital ga -etinye $ 300 nde na Space Coast iji wuo ụlọ nrụpụta satịlaịtị kachasị n'ụwa," Gọvanọ DeSantis. “Mmepụta Satellite bụ ma ga -aga n'ihu na -abụ akụkụ dị mkpa nke akụ na ụba na Space Coast, site na ọkwa a anyị na -akwalite ante. Na Florida anyị ga -aga n'ihu na -ebute ụzọ na mbara igwe site na itinye ego na akụrụngwa, na -azụ ndị ọrụ nwere nkà na ijigide ọnọdụ akụ na ụba nke na -enye ohere ka ụlọ ọrụ dị ka Terran Orbital nwee ọganihu. Ana m ekele ha na mkpebi siri ike ịbịa Florida. "
“Obi dị anyị ụtọ na anyị na ya ga-emekọ ihe Oghere Florida iji wuo ụlọ ọrụ anyị na -ele anya dị ka akụ nke mba: onyinye a na -akwado azụmaahịa maka ntọala ụlọ ọrụ mbara igwe nke mba anyị. ” Marc Bell, onye nchoputa na onye isi oche nke Terran Orbital kwuru. “Ọ bụghị naanị na anyị ga -enwe ike ịgbasa ike mmepụta anyị iji gboo mkpa na -arịwanye elu maka ngwaahịa anyị, mana anyị ga -ewetakwa ohere mmepụta ụgbọ ala bara uru na ikike na steeti Florida, na -etinye ihe karịrị nde $ 300 na owuwu na akụrụngwa ọhụrụ. Ka ọ na -erule ngwụsị nke 2025, anyị ga -emepụta ihe dị ka ọrụ ọhụrụ 2,100 na ụgwọ nkezi nke $ 84,000. ”
"Oghere Florida na -ekele Terran Orbital maka nhọpụta nke Florida na Mwepụta na Nweta Ọdụ na Kennedy Space Center (KSC) maka igwe nrụpụta satịlaịtị ọhụrụ, "Onye isi oche na onye isi oche Florida Frank DiBello kwuru. “Mkpọsa a bụ ihe ọzọ dị mkpa na idu ndú Florida na azụmahịa mbara igwe, na-enye mmepe ọgbara ọhụrụ, gụnyere mbido mbata na ikike ị nweta satịlaịtị na mbara ikuku. Anyị na -atụ anya ka Terran's Orbital nwee ihe ịga nke ọma n'afọ ndị na -abịa yana ọrụ na -aga n'ihu na uto na Florida ”